သွားတစ်ချောင်းနှုတ်လိုက်ရပြီးရင်၊ သွားဖုံးရိုးအနာကျက်လို့ သွားဖုံးသားပြည့်လာတာနဲ့ သွားပြန်အစားထိုးလို့ရပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်၊ သွားနှုတ်ပြီး၂လလောက်အကြာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုသွားအစားထိုးတာကို၊ မြန်မာလိုနားလည်အောင် သွားစိုက်တယ်လို့ဘဲ လွယ်လွယ်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ့်ကုသမှုအရ၊ သွားဖုံးရိုးထဲ သတ္တုတိုင် (dental implant) စိုက်ထည့်ပြီး သွားပြန်အစားထိုးတာကိုမှ၊ သွားစိုက်တယ်လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အခုလက်ရှိလုပ်နိုင်တဲ့နည်းက၊ သွားအရှင်အစားထိုးနည်းနဲ့ သွားအသေအစားထိုးနည်းနှစ်ခုဘဲရှိပါသေးတယ်။
၃။ သွားဖုံးရိုးအတွင်းသွားအသေစိုက်ခြင်း (dental implant)
- တစ်နှစ်တစ်ခါ ဆေးခန်းမှန်မှန်ပြန်ပြပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့လို
သွားစိုက်နည်းအမျိုးမျိုးရှိပေမယ့်၊ ကိုယ်နှုတ်လိုက်ရတဲ့သွားနေရာအနေအထား၊ အရေအတွက်နဲ့၊ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး၊ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့်နည်းကို ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dental implant နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်အရင်၊ မန္တလေးသွား-ဆေးတက္ကသိုလ်ကဆရာဝန်တစ်ယောက်၊ ကျွန်တော်အခုတက်နေတဲ့ဌာနမှာဘဲတက်ရောက်ပြီးစီးသွားပြီး အခုလောက်ဆို မြန်မာပြည်မှာ ကုသမှုတွေလုပ်နေလောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်လည်း အခွင့်ကောင်းလေးရခိုက်မှာ ရအောင် ကြိုးစားလေ့လာဆည်းပူးနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်တာနဲ့ စလုပ်နိုင်အောင် ရည်မှန်းထားပါတယ်။ အကြီးဆုံးပြဿနာက ကုန်ကျစရိတ်ပါဘဲ။ ဒီဂျပန်မှာတော့ Dental implant နဲ့ သွားသုံးချောင်းစိုက်ရင်၊ ကားအသစ်တစီးဝယ်လို့ရတဲ့ငွေပမာဏကုန်ကျပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့၊ အမေပေးထားတဲ့သဘာဝသွားကို စောင့်ရှောက်တာကမှ၊ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး၊ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်၊ သွားရောဂါကာကွယ်ရေးဦးစားပေးကြပါလို့၊ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Posted by Dr. Nyan at 8:45 AM
not so much, I think. I mean cannot buyacar.
it costsalot but not so much, if i can buyacar, i won't to fill up again. :D
using health insurance,.
You are very lucky to have your implant with health insurance, if it is true. Unfortunately, in Japan, no health insurance system covers dental implant treatment so that the patients have to bear all costs by themselves. In Tokyo Medical and Dental University, one implant treatment costs about 350,000 Yen. Open price for Toyota Passon is 966,000 Yen. What I wish to emphasize in this post is to take care one's natural teeth. Thank you.
မောင် ဆိုတဲ့ ညီမလေးရေ.း)
ညီမလေးတို့ ကျိုးတိုမှာတော့မသိဘူး. အမတို့ တိုကျိုမှာ
တော့ အင်ပလန့်သွားစိုက်ရင် insuranceကလုံးဝ မခံဘူး
အစ်မရဲ့ အရမ်းခင်ရတဲ့ အိုကားစံ အင်ပလန့်စိုက်ချင်လို့
ဦးဥာဏ်တို့ကျောင်းမှာ စိုက်ချင်ပေမယ့် ဈေးကပိုများနေ
လို့ အမတို့ အခုနေတဲ့မြို့မှာပဲစိုက်တာ တစ်ချောင်းကို
သောင်း ၄၀ နဲနဲကျော်သေးတယ် ညီမရေ..insurance
နယ်ဘက်တွေမှာ ဈေးသက်သာမယ်ဆိုရင်တော့ မိုက်တာပေါ့.. ဒါပေမယ့် အင်ပလန့်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကြီး မသက်သာလောက်ဖူးလို့ထင်တာပဲ..
အမလည်း စိတ်ညစ်နေတာ ဂျပန်ရောက်မှ သွားတွေက
ရောက် ပိုက်ဆံခဏခဏကုန်နေလို့လေ.. အခုလည်း
သွားတွေက ကျင်နေဆဲပါပဲ.. ဆက်လုပ်ရဦးမယ်..း)
အမကတော့ အမတို့မိသားစုရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ အင်ပလန့်စိုက်
မလားဆိုရင်တောင် မစိုက်ရေးချ မစိုက်နိုင်ပါရှင်.
အတိုးချပြီး သက်သက်သာသာနဲ့ သွားစိုက်တော့မယ်.အဟီးးး)))
ညီမလေးက သက်သက်သာသာနဲ့ အင်ပလန့်စိုက်လို့ရ
ဘယ်မြို့မှာ အင်ပလန့်တစ်ချောင်းကို ဈေးဘယ်လောက်
နဲ့ စိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ ပြောပြပေးပါဦးနော်.
Hi Dr. Nyan, thanks for this post. I'm looking for such knowledge and it definitely suit my requirements. Thanks again.